Fanaaniinta Tattoo - Fanaaniinta Tattoo | Tattooing (Bogga 2)
Barashada farshaxanada 'tattoo': Lepa Dinis
Waxaan kuu soo bandhigeynaa Lepa Dinis, oo loo yaqaan inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu jimicsiga badan adduunka. Farshaxan Tattoo ah oo ku takhasusay qaabka Jabaan.
Kat Von D, oo ah farshaxan caan ah oo caan ah.
Kat von D waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican tattooists-ka Mareykanka. In kasta oo ay run tahay in ...
Barashada farshaxanada 'tattoo': Ivana Belakova
Ivana Belakova waa farshaxan caan ah oo reer Slovakia ah oo leh qaab aad u xiiso badan oo qaab muuqaal ah oo muuqaal ah sababo la xiriira isku dhafka farsamooyin badan.
Tattoo-yada ubaxa ee farshaxanka tattoo Rita sameeyaa waa mid gaar ah
Waxaan ogaaneynaa sababta tattoosyada ubaxyada iyo caleemaha uu u sameeyo farshaxanka reer Yukreeniyaan ee Rita (Rit.Kitt) ay yihiin kuwo gaar ah.
Barnaamijyada Tattoo-ka ee aadan rabin inaad seegto
Haddii aad fadhid adoon aqoon waxa aad daawaneysid, waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso qeybaha labadan bandhig ee ku saabsan tatuurada taasoo aan kaaga tegeynin danayn la'aan.
Baro astaamaha farshaxanka Flavia Carvalho
Waxaa jira siyaabo badan oo loo qaado ficilada midnimada. Flavia Carvalho waxay u heellan tahay inay daboosho nabarrada rabshadaha jinsiga. Gali oo ogow taariikhdeeda.
Kulanka Tattooistayaasha: Lauren Winzer
Lauren Winzer waa farshaxanno caan ah oo caan ah oo ka socda Sydney (Australia). Waxaan kuu soo bandhigeynaa qaabkiisa tattoo-ga ah waxaanan ku tusaynaa qaar ka mid ah shaqadiisa.
Tattooisteyaasha ay tahay inaad raacdo barta Instagram-ka hadda
Waxaan soo aruurineynaa qaar ka mid ah farshaxanada 'tattoo' ee ay tahay inaad raacdo Instagram-ka hadda. Farshaxanno caan ah oo adduunka caan ka ah sida Victor Chil ama Pol Tattoo.
Tattoo Andrey Lukovnikov, raaxo loogu talagalay dareenka!
Waxaan soo aruurineynaa qaar ka mid ah astaamaha Andrey Lukovnikov. Farshaxan Tattoo ah oo leh qaab muuqaal gaar ah oo xiiso leh.
JC Sheitan Tenet, oo ah farshaxan jireed oo u adeegsada sanaaci inuu ku sawiro
JC Sheitan Tenet waa fanaan ku dhashay faransiiska oo aan haysan gacantiisa midig. Taabadalkeed, wuxuu adeegsadaa sanaaci gaar ah si uu awood ugu yeesho inuu sawiro.
Barashada farshaxanada 'tattoo': Ilya Brezinski
Waxaan kuu soo bandhigeynaa farshaxanka Ruushka ah Ilya Brezinski, oo ah farshaxan yahan ku xeel dheer farsamada dhibcaha Soo ogow astaamaha Ilya Brezinski.
Maxaan ubaahanahay inaan furo Istuudiyaha Tattooga?
Ma rabtaa inaad furto istuudiyo sawiro ah? Haddii aad rabto inaad furto dukaankaaga si aad ugu shaqeyso sida tattoo waxaad u baahan doontaa inaad la kulanto shuruudo kala duwan.
Erayada ay tatoojiyayaashu ku daaleen maqalka (Qaybta 1)
Waxaan diyaarinay liiskii ugu horreeyay ee weedho ah in farshaxanno-yaqaanka ay ku daaleen maqal maalin walba istuudiyohooda tattoo.
Tattoo artist Marco Manzo wuxuu mideeyaa tattoos iyo moodada
Farshaxaniistaha caanka ah ee reer Talyaani ee Marco Manzo ayaa ku milmay tatooyada iyo moodada mashruuc xiiso leh oo ka socda AltaRoma, oo ah dhacdo qurux badan oo xijaab leh.
Kulanka Tattooistayaasha: David Hale
Waxaan kuu soo bandhigeynaa tattooist iyo farshaxan David Hale. Wuxuu ku dhashay Georgia (USA), wuxuu hadda degan yahay Athens (Greece). A artist artist ah in ay tahay in aad tixgeliso.
La kulanka tattooists: Marla Moon
Waxaan dib u eegeynaa shaqooyinka farshaxanka tattoo Marla Moon, oo ah caan Madrid caan ku ah iyada oo ay ugu wacan tahay qaabkeeda dabeecadeed ee tatuurada joomatari ee madow.
Khibrada lagu sawirayo tattoo-ga LTW Tattoo oo leh Javier Rodriguez
Maqaalka fikradaha shaqsiyeed ee aan dib ugu eego qibradeyda ka dib markii aan ku sawiray LTW Tattoo Javier Rodriguez, mid ka mid ah farshaxanada ugu caansan ee la yaqaan.
Immisa lacag ah ayuu sameeyaa farshaxanka tattoo sanadkiiba?
Daabacaadda daraasad ka dib, waxaan la yaabanahay inta lacag ee farshaxan tattoo sameeya celcelis ahaan Spain. Waxay yihiin tirooyin aad u adag in la ogaado.
Alfredo Tomás «Fredy»: Murcian art
Alfredo Tomás "Fredy" dad badan ayaa u haysta inuu yahay farshaxanka ugu fiican ee Murcia iyo mid ka mid ah kuwa ugu fiican Spain.
Waa maxay muraayadaha maqaarku ka samaysan yihiin?
Maxay gashiga tattoo ka sameysan yihiin, maanta waxaan ogaaneynaa waxyaabo ka kooban.
Istuudiyaha Tattoo-ka ee Oviedo
Dhaqanka tattoo wuxuu leeyahay bastion aad u muhiim ah caasimada Asturia. Istuudiyaha Oviedo tattoo wuxuu u taagan yahay daaweyntooda aan caadiga ahayn iyo tayo sare leh.
Istuudiyaha Tattoo ee Salamanca
Salamanca, oo ah dhul dhaqameed iyo meel loogu tala galay ardayda ka kala timid daafaha dunida, waxay ka mid tahay meelaha hormoodka ka ah farshaxanka. Magaaladaan waxaan ka helnaa qaabab kaladuwan oo muhiim ah, dhammaantoodna leh tayada ugu sareysa.
Istuudiyaha Tattoo ee La Coruña: waqooyiga sidoo kale farshaxan ayaa jira
Magaalada La Coruña waxay hodan ku tahay dhammaan noocyada muujinta farshaxanka. Iyo, dabcan, sida muujinta farshaxanka ah ee ay yihiin, sawir gacmeedyadu waa inay qabsadaan meel muhiim ah nolosha A Coruña.
Joe Capobianco oo ah farshaxan tattoo weyn
Ogaanshaha farshaxanada waaweyn ee tattoo waligood waxba ma yeeli doonaan, maanta waxaan ka hadlaynaa Joe Capobianco.